Ny antoka ho an'ny tetezamita ho an'ny tetezana Yavuz Sultan Selim dia tsy teo intsony | RayHaber | raillynews
[16 / 02 / 2020] Imamoğlu dia nitarika fiara fanandramana voalohany tany Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line	34 Istanbul
[16 / 02 / 2020] 6 Voarohirohy tamin'ny kolikoly atsofoka ao amin'ny TCDD	Ankara 06
[16 / 02 / 2020] Ny Fahatsiarovana ny Tranon-tsambo fotsy Fahatsiarovana an'i Atatürk	Ankara 06
[16 / 02 / 2020] Istanbul Bar Association Channel natao mba hanafoanana ny fanapahan-kevitry ny EIA	34 Istanbul
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulNy antoka ho an'ny pas dia omena ho an'i Yavuz Sultan Selim Bridge dia tsy nitàna intsony
Ny antoka ho an'ny pas dia omena ho an'i Yavuz Sultan Selim Bridge dia tsy nitàna intsony
21 / 01 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Rohibe, Highway, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Yavuz Sultan tsy nitazona ny antoka ho an'ny tetezana Selim.
Tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2019, ny vola tokony haloa amin'ny ICA nataon'ny mpandraharaha IC İçtaş İnşaat - kaonsortium Astaldi, eo ambany fiantohana, dia natao farany, satria ny isan'ny fiara natokana ho an'ny tetezana Yavuz Sultan Selim dia tsy nandalo. Amin'ity herinandro farany amin'ny volana ity dia hatao ny fandoavam-bola manodidina ny 1.6 miliara (mety hisy fiovana kely). Ny ICA dia nandoa vola mitentina 1 tapitrisa tapitrisa tapitrisa dolara tamin'ny antsasaky ny taona voalohany.
Raha tsy nandalo ny tetezan'i Yavuz Sultan Selim tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2019 ny fiara efa nambara mialoha, ny volan'ny vola tokony haloa amin'ny ICA ataon'ny mpandraharaha IC İçtaş İnşaat-Astaldi amin'ny alàlan'ny antoka dia voafaritra indrindra.
Araka ny vaovao nataon'i Olcay Aydilek avy ao Habertürk; Vola mitentina manodidina ny 1.6 miliara TL no hatao amin'ny consortium amin'ny herinandro farany amin'ny volana ity. Ny ICA dia nandoa 1 tapitrisa dolara 450 tapitrisa nandritra ny tapany voalohany tamin'ny taona. Yavuz Sultan Selim-Northern Ring Motorway, Osmangazi Bridge ary Gebze-Orhangazi-Izmir Lalamby, Eurasia Tunnel dia natsangan'ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ny modely fananganana-famindrana (BOT). Amin'ireny tetik'asa ireny, ny vidin'ny tetezan'ny fiara dia voafaritra amin'ny vola vahiny. Ny fanjakana dia nanome toky ny fifindran'ny fiara maromaro amin'ireto tetikasa ireto. Raha ny lozam-pifamoivoizana no eo ambanin'ny fetra nomena, ny fanjakana dia mandoa ny fahasamihafana.
I IC İçtaş Construction-Astaldi consortium ICA dia miasa amin'ny tetezana Yavuz Sultan Selim sy ny lalambe Northern Ring. Niara-niasa tamin'ny ministeran'ny fitaterana ny ICA taorian'ny fitomboan'ny vidin'ny dolara tamin'ny volana aogositra 2018. Nanondro ny fihenam-bidy ao amin'ny taham-panakalozana izy dia nangataka ny fanovana ny fomba kajy ny fanamboarana azo atao eo ambany fiantohana. Nangataka ny fifanakalozana ny volana Janoary ho an'ny tapany voalohany amin'ny taona sy ny tahan'ny dolara ho an'ny tapany faharoa. Io fangatahana io dia hita fa 'mety'. Talohan'izay, ny tahan'ny dolara tamin'ny Janoary nifanaraka dia noraisina ho fototry ny vola ary ny fandoavana antoka dia natao indray mandeha tao anatin'ny volana avrily tamin'ny taona manaraka.
2020 Toll Bridge Bridge Yavuz Sultan Selim
Ny andro voalohany niasan'ny herinandro Yavuz Sultan Selim Bridge dia tsy nahaliana azy
Nambara ny volavolan-dalan'i Yavuz Sultan Selim Bridge
Yavuz Sultan Selim sy ny volan'ny tetezana Osman Gazi
Antsipirihany momba ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony nataon'ny tetezana Yavuz Sultan Selim
Ilay mpandraharaha ara-panatanjahan'i Yavuz Sultan Selim Bridge niteny hoe Ibrahim Chechen
Yavuz Sultan Selim Bridge 3. tetezana
Yavuz Sultan Selim Tetezana anaty tarehimarika
Tetezan'i Yavuz Sultan Selim ao anatin'ny faritry ny Tetikasa Mormara Avaratra Avaratra ...
Mihazakazaka haingana ny Bridge Bridge Yavuz Sultan Selim
Sariitatra ny Yavuz Sultan Selim Bridge
3. Countdown eo amin'ny Tafika Bosphorus Yavuz Sultan Selim
Mpianatra DPU nanadihady an'i Yavuz Sultan Selim Bridge Construction
Tapitra ny Yavuz Sultan Selim Bridge (Video)
Ny Jaminan'i Yavuz Sultan Selim Bridge Pass
Olana Ballast ao Ankara Sivas YHT Line! 60 kilao ny kilaometatra kilometatra
Vonona ny fitaterana ny garan-dalamby Adapazarı ve ny tetikasa?
Imamoğlu dia nitarika fiara fanandramana voalohany tany Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line
Androany amin'ny tantara: 16 Febroary 1914 amin'ny Kagithane-Tree Lalana